Tilmaamaha A ilaa Z ee Shahaadada Shakhsi ahaaneed | Martech Zone
Markii aan sii weynaaday, waxaan bilaabay inaan ogaado in tilmaame muhiim ah oo ku saabsan guusha ganacsigeygu yahay qiimaha shabakadda aan hayo oo aan ilaaliyo. Waa sababta aan ugu qaato waqti aad u tiro badan sanad walba isku xirka, la hadalka iyo kaqeybgalka shirarka. Qiimaha ay soo saarto shabakadeyda deg degga ah, iyo shabakadeyda shabakada ayaa laga yaabaa inay ka kooban tahay 95% dakhliga guud iyo guusha ganacsigeygu ogaado. Taasi waa natiijada in ka badan toban sano oo dadaal ah oo aan sameeyay si aan u caawiyo dadka sidaada oo kale ah oo aad u hesho una adeegsato tikniyoolajiyad inay kaa caawiso baahida suuqgeyntaada. Tiknoolajiyada suuqgeynta ma ahan kaliya bloggeyga, hadda waa aniga sumad shaqsiyeed.
Waxaan jecelahay inaan ka fikiro sumadeynta shaqsiyeed sidii dariiq aan ku bilaabo la xiriirka dadka ka hor inta aanan la kulmin. Markaad saxdo, waxay lamid tahay inaad saaxiib yeelato isbarasho shaqsiyeed. Miyaadan jeclayn markay taasi dhacdo? Sameynta wax si aad u horumariso astaantaada shaqsi ahaaneed waxay ku saabsan tahay qofka aad tahay iyo waxa aad rabto in lagugu yaqaan. Haddii aad dooneysid shaqo doon, iibin, ama maamule raadinaya qorista, waxaa jira waxyaabo badan oo aad ka faa'iidi karto ka sheekeynta sheekada xagga aragtida aadanaha, sida saxda ah ee aad u rabto in laguu sheego. Seth Price, Placester.
Xogtan waxaa ku shaqeeya talooyin yaab leh oo ka yimid Barry Feldman (Akhriso: Raadi Naftaada: Calaamadeyn Shakhsiyeed Waa Inay Tahay). Maal gasho astaantaada - shirkaduhuna way ku maalgashan doonaan adiga! Marabtaa aqrin qoto dheer? Waxaan kugula talin lahaa Naqshadeynta Naftaada: Sida Loogu Adeegsado Baraha Bulshadda Si Loo Abuuro Ama Loo Cusboonaysiiyo Naftaada asxaabta Erik Deckers iyo Kyle Lacy.
Tags: Erik Deckerskyle lacysumad shaqsiyeedsumad shaqsiyeedmeel dhigidqiimaha seth
Apr 8, 2014 at 5: 41 PM
Waad ku mahadsan tahay sheegista, boostada, iskuxirka boostadayda cusub, iyo guud ahaan inaad tahay nin fiican Douglas. Way fiicnayd inaan kugula kulmo deked dhawr toddobaad ka dib.